အလုပ် မြန်မာ - မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ဂိုဒေါင်လုပ်သား အလုပ်အကိုင်များ
ဆေးဝါးနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ 3
အလုပ် 43 ခုရှာတွေ့ပါသည်။
- စတို နှင့်ပတ်သတ်သည့် အတွေ့ကြုံရှိသူ - လုပ်သက်အနည်းဆုံး (1) နှစ်အထက် - စတို အဝင်အထွက်အား Daily စစ်ဆေးနိုင်သူ - ဌာနဆိုင်ရာ အလိုက် ပစ္စည်းထုတ်ပေးနိုင်သူ
Warehouse Staff (Male)
- 10 တန်း မအောင်မြင်သူများလဲလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ - သက်ဆိုက်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူများကို ဦးစားပေးရွေးချယ်သွားမည်။
-ကုန်တင်ချိန်မှ - ပို့ဆောင်ချိန်အထိ activities များအတွက် principalsများ ၊ agentsများ ၊ အာဏာပိုင်များနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။ -သွင်းကုန်နှင့် ပို့ကုန်ဖောက်သည်များထံ အဆင်ပြေချောမွေ့သော ဝန်ဆောင်မှုကိုရရှိစေရန်ဆောင်ရွက်ရမည်။ -customer လိုအပ်ချက်များကို ထိထိရောက်ရောက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပြီး customer feedback/complain များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်။ -သတ်မှတ်ထားသော key performance indicatorsများကို ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်စေရန် နေ့စဉ် / အပတ်စဉ် / လစဉ်အစီရင်ခံစာကိုဖန်တီးရမည်။ -Ensure to carry out the relevant action agreed on the business plan with the objective of supporting the front line to achive the agreed imports volume/revenue and other targets ensuring the long term growth of the organization
အကျိုးအမြတ်: Annual Performanceပေါ်မူတည်‌၍ပေးသော Bonusရမည်။
- Sales Target ပြည့်မီစေရန် Selling သို့ ပစ္စည်းထုတ်ပေးသည့်အပိုင်းအား သေချာစွာစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ရမည်။ - Expire & Damage နည်းပါးစေရန်အတွက် FIFOစနစ်အားကျင့်သုံးရမည်။ - Receiving ပြုလုပ်ရန် စစ်ဆေးခြင်းခြင်း၊လက်ခံခြင်းများဆောင်ရွက်ရမည်။ - ကုန်လက်ကျန်စာရင်းကောက်ယူရန်အတွက်ကြိုတင်စီမံထားရမည်။ - Supplier, Warehouse တို့မှပေးသော ပစ္စည်းများအား Quantity, Quality, Packing Size တို့အားသေချာစွာ စစ်ဆေးလက်ခံရန်။
Warehouse စာရင်းကိုင် (စစ်တွေ)
Site တစ်ခုချင်းစီ၏ ပစ္စည်းအ၀ယ်စာရင်းမှတ်ရန်။ Warehouseသို ပစ္စည်းအ၀င် / အထွက်မှတ်ရန်။ Materials များ Dataသွင်းရန်။ Documents များ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ရမည်။ Finance Controllerသို နေ့စဉ် Reportတင်ရမည်။ စာရင်းများကို တိကျပိုင်နိုင်ရမည်။
- Sales Target ပြည့်မီစေရန် Selling သို့ ပစ္စည်းထုတ်ပေးသည့်အပိုင်းအား သေချာစွာစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ရမည်။ - Store အတွင်းရှိ Shelf, Product, Equipment, Ground အစရှိသည်တို့အား သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ရမည်။ - Store ထဲတွင်ပစ္စည်းထားသိုမှုအား အပျက်အစီးထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင် သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းစနစ် အတိုင်း စနစ်တကျသိမ်းဆည်းရမည်။ - Expire, Damage နည်းပါးစေရန် FIFOစနစ်အားကျင့်သုံးရမည်။
ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း | ရန်ကုန်တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း
ကုန်ပစ္စည်းများကိုဂိုဒေါင်မှကုန်လှောင်ရုံသို့ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း နေ့စဉ်/အပတ်စဉ် မှတ်တမ်းများကို စစ်ဆေးပြီး မှတ်တမ်းများ မှန်ကန်ပြီး updateလုပ်ကြောင်း သေချာစေရန် စစ်ဆေးခြင်း။။ မှတ်တမ်းအားလုံးကို traceability အတွက်သေချာသိမ်းထားခြင်း။ အစီရင်ခံစာများနှင့် အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်များအားလုံးကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ လုပ်ဆောင်ကြောင်း သေချာစေရန် စစ်ဆေးခြင်း။ အပတ်စဉ် စက်ဝိုင်းရေတွက်မှုကို အချိန်ဇယားဆွဲပြီး မန်နေဂျာထံ သတင်းပို့ခြင်း။ သင့်တော်သောအသုတ်နှင့်သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက် (FEFO) ကိုစီမံခြင်း။ သိုလှောင်ဧရိယာတွင် သက်တမ်းလွန်ထုတ်ကုန်များ သိမ်းဆည်းထားခြင်း မရှိကြောင်း သေချာရန် စစ်ဆေးခြင်း။ ကုန်ပစ္စည်းအသုတ်နံပါတ်၏ တိကျမှုကို သေချာရန် စစ်ဆေးခြင်းနှင့်တံဆိပ်စာရေးကိရိယာများ သိုလှောင်မှုကို ထိန်းချုပ်ပြီး လစဉ် ပုံမှန်ပြန်စီခြင်း။ သက်ဆိုင်ရာပါတီများသို့နေ့စဉ် GRN သတင်းအချက်အလက်ကိုအသိပေးခြင်း။ ထိန်းချုပ်ထားသော ဆေးဝါးသိုလှောင်မှုအတွက် သော့ထိန်းချုပ်မှုအာဏာကို ရယူခြင်း။ ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ကွက်လပ်များ၊ နေရာများ၊ စင်များ၊ စင်များ၊ ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများ၊ လူသွားစင်္ကြံများ၊ ဖုန်မှုန့်ပုံးများနှင့် သတ်မှတ်ထားသောနေရာကို အချိန်တိုင်း သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း။ ကုမ္ပဏီ၏ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို နားလည်ပြီး လိုက်နာခြင်း။ ကောင်းစွာနားလည်ပြီးကုမ္ပဏီ၏အရည်အသွေးမူဝါဒကိုတင်းကြပ်စွာလိုက်နာခြင်း။ စတော့များရောင်းရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ရန်သေချာသေချာစေရန် စစ်ဆေးခြင်း။။ ဂိုဒေါင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် ISO 9001:2015 နှင့် စသည်တို့ကို လိုက်နာကြောင်း သေချာစေရန် စစ်ဆေးခြင်း။။ GSDP၊ စာရင်းတိကျမှု၊ စာရွက်စာတမ်းထိန်းချုပ်မှု၊ ကာလအပိုင်းအခြားအလိုက် ဒေတာစုဆောင်းမှု၊ အဖွဲ့အလုပ်များ သတ်မှတ်ထားသော SOPs များနှင့် KPIs များနှင့်အညီ Warehouse ၏နေ့စဉ်လည်ပတ်မှုကိုကြီးကြပ်ခြင်း။ ကြီးကြပ်သူမှပေးအပ်သောအခြားမည်သည့်အလုပ်ကိုမဆိုလုပ်ဆောင်ခြင်း။။
အကျိုးအမြတ်: - Ferry ပေးမည်။ - Quarterly Bonus ပေးမည်။ - Yearly Bonus ပေးမည်။"
Recruiter active 56 mins ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
Daily Star Co.,Ltd.
မဟာအောင်မြေ | မန္တလေးတိုင်း မန္တလေးတိုင်း
အင်ဂျင်ဝိုင် paper များ အတင်ချ လုပ်ရမည် ပေးအပ်ထားသော တာဝန်များအား ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ရမည် Store ပိုင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော သဘောတရားများ အားနားလည်သူဖြစ်ရမည် သွက်လက်ပြီး အဖွဲ့စည်းနှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်
- ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ စီစဉ်ခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ဖြန့်ဖြူးရေးဆောင်ရွက်ခြင်းတို့အတွက် Account Manager ကို ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ - ဝယ်ယူမှုမှတ်တမ်းများ၊ အချက်အလက်များနှင့် ဈေးနှုန်းများကို System တွင် အပြည့်အစုံ ထိန်းသိမ်းထားရှိနိုင်ရမည်။ - ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပဝယ်ယူမှုလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ - စက်ရုံများနှင့် Vendor များမှ ဝယ်ယူထားသောပစ္စည်းများမှ ချို့ယွင်းမှုများ၊ ပျက်စီးမှုများ၊ အစိတ်အပိုင်းများပျောက်ဆုံးခြင်းများအတွက် claim ပြုလုပ်သည်များကို စောင့်ကြည့်၍ ဖြေရှင်းနိုင်ရမည်။ -Monitor and co-ordinate deliveries of items between suppliers to ensure that all items are delivered to site/store on time -Documentation and delivery time follow up related to purchasing, maintain database -Willingness to travel -Establish and maintain collaborating relationships with customers and Vendors -Plan and manage inventory levels of materials or products -Monitor the stock levels and report status, Schedule store visits -Source for new parts, suppliers or sub-contractors when the need arises -Arraging for deliver the items/Products to other cities -Handling for Fixed Assests Movement.
ကုန်ပစ္စည်းများအား စီစဉ်ထိန်းသိမ်းခြင်း ကုန်များအား စီစဉ်ခြင်း၊ ဂိုဒေါင်နှင့်ပက်သက်သော စည်းကမ်းများအား လိုက်နာရမည်။ အပျက်အစီးများကြောင့် ဆုံးရှုံးမှု မဖြစ်စေရန် ပစ္စည်းများအား မှန်မှန်ကန်ကန် ဆီလျော်အောင် စီစဉ်ထိန်းသိမ်းရမည်။ ကုန်ပစ္စည်းများ ပျောက်ဆုံးပျက်စီးနိုင်သည့် အန္တရာယ်အလားအလာအား အချိန်မှန် အစီရင်ခံရမည်။ ကုန်ပစ္စည်းပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ဂိုဒေါင်ပစ္စည်းထိန်းသိမ်းခြင်းများအား မှန်ကန်စွာနှင့် သတ်မှတ်အချိန်အတိုင်းအတာအလိုက် လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။ ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရန် အရည်အသွေးအား ထိန်းသိမ်းရမည်။ စာရွက်စာတမ်းများနှင့် ဂိုဒေါင်သန့်ရှင်းကို အလေးထားဆောင်ရွက်ရမည်။ ပစ္စည်းအသွင်းအထုတ် ပြုလုပ်တိုင်း စာရွက်စာတမ်းများ၏ အကြောင်းအရာအား ပြည့်စုံအောင်ချက်ချင်းပြင်ဆင်နိုင်ရမည်။ အထက်လူကြီးများမှ ချမှတ်ပေးထားသည့်အတိုင်း ဂိုဒေါင်အား သေချာစွာသန့်ရှင်းရမည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ စာရွက်စာတမ်းများအား သေချာစွာ မှတ်တမ်းတင်ထိန်းသိမ်းရမည်။
အကျိုးအမြတ်: Phone Bill Allowance ဘောနပ်စ် + ကော်မရှင် အချိန်ပိုကြေး
Picking, Inspection, Delivery စသည့် daily job များကိုဆောင်ရွက်ရမည်။ Warehouse အတွင်းရှိ inventory ကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းနိုင်ရမည်။ Inbound, outbound, storage စသည့် warehouse process များတွင် team work ဖြင့်လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ လစဥ် container အဝင်များအတွက် လိုအပ်ပါက ညဆိုင်း လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ လိူင်သာယာမြို့နယ်ရှိ Warehouse တွင် အလုပ်ဆင်းနိုင်ရမည် ဖြစ်ပါသဖြင့် လှိုင်သာယာနဲ့ အနီး နေထိုင်သူဦးစားပေးမည်။ ဆယ်တန်းအောင် ပညာအရည်အချင်းဖြစ်ရပါမည်။
Shwe Daung Min
ရိုးသားကြိုးစားပြီး ကုမ္ပဏီနှင့်ရေရှည်လက်တွဲနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ လှိုင်သာယာတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
- Site Engineers တောင်းသော ပစ္စည်းများအား Site Store တွင် ပစ္စည်းရှိ မရှိစစ်ဆေးရမည်။ - Site Store တွင်လိုအပ်သော ပစ္စည်းများအား Store Account / Assistant Store Account သို့တင်ပြရမည်။ - Site တွင်လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများအချိန်မှီ ရရှိရေးအတွက် Purchase Department နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရမည်။ - Store တွင်ပစ္စည်းများ လက်ခံခြင်း၊ ထုတ်ပေးခြင်းများအား ကုမ္ပဏီမှချမှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းများအတိုင်း ဆောင်ရွက် နိုင်မည်။ - လစဉ် Reports အား သတ်မှတ်ရက်အတွင်းရောက်ရှိအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ - ကုမ္ပဏီပိုင် ပစ္စည်းများအား စနစ်တကျသိုလှောင်နိုင်ရန် သိုလှောင်မှုပုံစံ နေရာအကျယ်အဝန်း မီးဘေးလုံခြုံရေး၊ လုပ်ငန်း ခွင်အန္တရယ်ကင်းရှင်းရေးတို့အတွက် ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ - ပစ္စည်းများပျက်စီးဆုံးရှံးမှု နှင့် အလေအလွင့်နည်းပါးအောင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောင်နိုင်ရမည်။ - နေ့စဉ် ပစ္စည်းလက်ခံထုတ်ပေးခြင်း Store နှင့်သတ်ဆိုင်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ ထိန်းသိမ်းခြင်း စာရင်းပြုစုခြင်း များ ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ - Store Report နှင့် မြေပြင်လက်ကျန်များ လစဉ်တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးရမည်။
အကျိုးအမြတ်: - Project Pay - Bonus"
Justice Auto One Stop Service Center
~ကားSpear Parts နားလည်သိကျွမ်းသူဖြစ်ရမည်။ ~လိုအပ်သော မည်သည့်ကားSpear Parts မဆို အချိန်တိုအတွင်း စုံစမ်းရှာဖွေနိုင်ရမည်။
- ဌာနအတွင်းမှ နေ့စဥ်အမှာပစ္စည်းများအား SAP software တွင် စာရင်းရေးသွင်းခြင်း၊ ပစ္စည်းမှာယူခြင်း ဆောင်ရွက်ရန် - အမှာတင်ထားသည့် ပစ္စည်းများ သတ်မှတ်ချိန်အတွင်းရရှိခြင်း ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးရန် - အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းစာရင်းများအား တစ်လတစ်ကြိမ် လချုပ်ပြုလုပ်ပြီး အထက်အရာရှိသို့ တင်ပြရန်
Aung Myin Thu Trading
1. အလုပ်ကို သေချာစီစစ်လုပ်ကိုင်နိုင်သောသူဖြစ်ရမည်။ 2. ကျန်းမာရေးကောင်း၍ သွတ်လက်ဖျက်လတ်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ 3. အများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရပါမည်။ 4. စကားပြော ပြေပြစ်ရပါမည်။ 5. လုပ်ငန်းခွင်တွင်းလေ့လာသင်ယူမှု ကောင်းသူ ဖြစ်ရမည်။ 6. အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။
Inspector Tally (ေန႕စား)
- ဂိုထောင်နှင့်ပတ်သတ်သော အတွေ့အကြုံရှိသူများဦးစားပေးမည်။ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမရှိသူများလည်းလျောက်ထားနိုင်ပါသည်။ - အကျင့်စာရိတကောင်းမွန်၍ ပြစ်မှုကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။ - ရန်ကုန်မြို့တွင်း တာဝန်ကျ‌ရာနေရာသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်နိုင်ရမည်။
- နေ့စဉ် လယ်ဂျာစာရင်းများ မှန်ကန်အောင်ရေးသွင်းနိုင်ရမည်။ - ပစ္စည်းများ လက်ခံ / ထုတ်ပေးသည့်အခါတိုင်း ကုမ္ပဏီ၏ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ အတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ - ကုမ္ပဏီပိုင် ပစ္စည်းများအား အလေအလွှင့်နည်းပါးအောင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် နိုင်ရမည်။ - သိုလှောင်ရုံအတွင်း ပစ္စည်းများအား စနစ်တကျဖြင့်သက်မှတ်ထားသော နေရာများတွင် သန့်ရှင်း သပ်ရပ်စွာ ထားရှိနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ရမည်။ - စာရွက်စာတမ်းများအား စနစ်တကျ ပြုစုထိန်းသိမ်း နိုင်ရမည်။ - လစဉ် လချုပ်များအား သတ်မှတ်ထားသော ရက်အတွင်း အချိန်မှီပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ - အခါအားလျော်စွာ အထက်မှာပေးအပ်သော တာဝန်များ ကျေပွန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: Profit Sharing No Late/ No Leave"
Ngwe Oak Trading Co.,Ltd.
Warehouseနှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းစဥ်များအား နည်းလည်ရျ် ကျွမ်းကျင်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ ပစ္စည်းအ၀င်အထွက် ထားသိုသိမ်းစည်းမှုများကို စနစ်တကျ Manage ပြုလုပ်နိုင်ရမည်။ Team work ဖြင့် အလုပ်လုပ်နိုင်သူဖြစ်ပြီး မိမိအဖွဲ့အား ကောင်းစွာ စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်ရမည်။ တာ၀န်ယူမှု တာ၀န်ခံမှုရှိပြီး ရေရှည် လက်တွဲလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။
ကုန်ပစ္စည်းများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပေးပို့ကြောင်း အတည်ပြုရမည်။။ အမျိုးမျိုးသောစာရင်းရေတွက်မှုကိုလုပ်ဆောင်ပါ။ လိုအပ်သလို ပစ္စည်းတွေ နဲ့ ပစ္စည်းတွေ မှာယူရမည်။ Forklift operations များကို ကြီးကြပ်ရမည်။ သိုလှောင်ရုံနှင့် စက်ယန္တရားများကို ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း အသုံးချခြင်း၊ အလုပ်သမား အသုံးချခြင်းတို့ကို သေချာစွာ ထိန်းသိမ်းရမည်။ ဂိုဒေါင်ဝန်ထမ်းအသစ်များ ငှားရမ်းခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ သင့်လျော်သော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ထုပ်ပိုးမှုနှင့် ထုတ်ကုန်များကို နေရာချထားရမည်။ ပေးထားသောလုပ်ငန်းများကို ထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဂိုဒေါင်ဝန်ထမ်းများအား လှုံ့ဆော်ပေးပြီး ဦးဆောင်ရမည်။ မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန် သို့မဟုတ် ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန် သုံးစွဲသူများနှင့် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရမည်။ ပစ္စည်းများကို မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်း လိုအပ်သောအချက်အလက်များကို မှတ်တမ်းတင်ကာ ပရောဂျက်ဂိုဒေါင်အခြေအနေအတွက် အစီရင်ခံစာများကို အသုံးချရမည်။ တိုးတက်မှုများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီး ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို ဆောင်ရွက်ရမည်။ သို့မဟုတ် လက်ရှိအလုပ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အလေ့အကျင့်များကို ချိန်ညှိရမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီး လုပ်ငန်းများကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။ ကုမ္ပဏီ၏ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ ဌာနမန်နေဂျာအတွက် အချက်အလက်များကို စုဆောင်း၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး အကျဉ်းချုံ့ခြင်းဖြင့် နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ် အစီရင်ခံစာများကို ပြင်ဆင်ရပါမည်။ အခြားတာဝန်များ၊ တာဝန်များနှင့် အရည်အချင်းများကို လိုအပ်သလို လိုအပ်သလို တာဝန်ပေးအပ်နိုင်ပါသည်။
ကုန်ပစ္စည်းများအား စီစဉ်ထိန်းသိမ်းခြင်း အပျက်အစီးများကြောင့် ဆုံးရှုံးမှု မဖြစ်စေရန် ပစ္စည်းများအား မှန်မှန်ကန်ကန် ဆီလျော်အောင် စီစဉ်ထိန်းသိမ်းရမည်။ ကုန်ပစ္စည်းပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ဂိုဒေါင်ပစ္စည်းထိန်းသိမ်းခြင်းများအား မှန်ကန်စွာနှင့် သတ်မှတ်အချိန်အတိုင်းအတာအလိုက် လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်းချဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ဂိုဒေါင်ထိမ်းသိန်းမှုနှင့် ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းများအား ကျွမ်းကျင်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။ စာရွက်စာတမ်းများနှင့် ဂိုဒေါင်သန့်ရှင်းကို အလေးထားဆောင်ရွက်ရမည်။ ပစ္စည်းအသွင်းအထုတ် ပြုလုပ်တိုင်း စာရွက်စာတမ်းများ၏ အကြောင်းအရာအား ပြည့်စုံအောင်ချက်ချင်းပြင်ဆင်နိုင်ရမည်။ အထက်လူကြီးများမှ ချမှတ်ပေးထားသည့်အတိုင်း ဂိုဒေါင်အား သေချာစွာသန့်ရှင်းရမည်။
အကျိုးအမြတ်: - Salary + Overtime allowance + Social Welfare
Volvo Cars (Myanmar)
Ware house ၏လုပ်ဆောင်ချက်ကိုပံ့ပိုးပါ။ လက်ကျန်ငွေနှင့် စာရွက်စာတမ်းကို ပေးပို့ပြီး ပို့ဆောင်ပြီးနောက် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အကောင့်စတော့တည်နေရာကို ပေးပို့ပါ။ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အကောင့်သို့ ပို့ဆောင်ရေး ကိုယ်စားလှယ် ငွေပေးချေမှု အစီအစဉ်အတွက် တာဝန်ယူပါသည်။ Doc ကို Air Cargo terminal (လေဆိပ်) သို့ပို့ပါ / ပင်လယ်စာဖြင့်ပေးပို့ပါ။ Air cargo terminal (လေဆိပ်) ၊ ပင်လယ်ရေကြောင်း ကုန်ပစ္စည်းအဝင်အထွက်အတွက် ဂိုဒေါင်နှင့် စီစဉ်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: အချိန်ပိုကြေး စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ဆုလာဘ်များ
- Warehouse stock Control Sale Issue ကို နေ့စဉ် Sale Team ဖြင့် စာရင်းကိုင်ဌာနသို့ သတင်းပို့ပါ။ - စတော့စာရင်း Update ကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်ရမည်။ - မြေပြင်စတော့ကို ၃လတစ်ကြိမ် စစ်ဆေးခြင်း။ - နေ့စဉ်နှင့် လစဉ် W/H အကောင့်ကို လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်။
အကျိုးအမြတ်: Ferry , Uniform
Junior Staff (Auditor & Stock Controller Dept)
Shwe Set Kyar Ko Tint Wai
- စာရင်းပိုင်းစိတ်ဝင်းစားသူဖြစ်ရမည်။ - Computer Excel / Word ကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။
ချမ်းမြသာစည် | မန္တလေးတိုင်း မန္တလေးတိုင်း
Stock စာရင်းများအား သေချာစွာစစ်ဆေးပြီး စာရင်းပြုစုနိုင်ရမည်။ ပစ္စည်းများအား ဂိုထောင်တွင် သေချာစီစစ်၍ ထားသိုနိုင်ရမည်။ ပစ္စည်းများအား Invoice Vr နှင့် တိုက်၍ ထုတ်ပေးနိုင်ရမည်။ ပစ္စည်းအဝင်အထွက်စာရင်းများအား သေချာစွာစာရင်းလုပ်ပေးနိုင်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: အလုပ်ချိန် - မနက် 8:30 မွ ညေန 5:30 ထိ * ပိတ်ရက် - Sunday နှင့် Public Holiday
ေန႔စဥ္ သက္ဆိုင္ရာရံုးသို့ ေငြလႊဲရျခင္း၊ Warehouse မွ ပစၥည္းထုတ္ / သြြင္း ျခင္းမ်ား ၊ WH ပစၥည္းစာရင္းမ်ားအား Computer ျဖင့္ စာရင္းသြင္ရျခင္း၊ စစ္ေဆး၍ ထုတ္ေပးရျခင္း၊ လစဥ္ Ground Stock မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာရံုးခ်ုပ္/ရံုးခြဲ သို့ေပးပို့ရျခင္း။
Royal Phyu Trading
- ဂိုဒေါင်အဝင်အထွက်စာရင်းများကို ကျွမ်းကျင်စွာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်သူ ဖြစ်ရပါမည်။ -အချိန်နှင့်တပြေးညီ Stock စာရင်းများကို စစ်ဆေးနိုင်ရမည်။ - ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရပါမည်။ -နယ်သွားနိုင်ရမည်။